कोरोनाले पुरुषको यौन चाहनामा कमी: अध्ययन - नेपालबहस
कोरोनाले पुरुषको यौन चाहनामा कमी: अध्ययन
| १२:३१:१० मा प्रकाशित
२१ जेठ, काठमाडौं । विश्वभरमा देखा परेको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले पुरुषको यौन जीवन प्रभावित भएको एक अध्ययनले जनाएको छ ।
अध्ययनका अनुसार कोरोनाको कहरमा देखिएका लक्षणले नयाँ नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । अब नयाँ अनुसन्धानमा पत्ता लागे अनुसार पुरुषको यौन जीवन पनि कोभिड–१९ का कारण प्रभावित भइरहेको जनाइएको हो ।
नेपालमा लगायत विश्वका धेरै भू–भागमा अहिले पनि काेराेना भाइरस नियन्त्रणका लागी निषाेधाज्ञा लागु गरिएकाे छ । तर महामारी बढ्दै जाँदा लकडाउनले दाम्पत्य सम्बन्धलाई असर गरेकाे र धेरै दम्पतीका लागि यौन चाहना ज्यादै कम हुँदै गएकाे अध्ययनले जनाएको छ ।
अनुसन्धानका अनुसार कोरोनाका कारण पुरुषमा इरेक्टाइल डिसफंक्सन अर्थात् नपुंसकता देखिएको छ । यसका कारण पोस्ट कोभिड स्ट्रेस, डिप्रेशनका साथै केही हदसम्म शरीरभित्र हुने परिवर्तन पनि समावेश छन् । एक भारतीय सञ्चार माध्यमले यसबारे केही विशेषज्ञसँग कुरा गरेका छन् ।
मेन्स हेल्थमा छापिएको एक अनुसन्धानमा युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाको युरोलोजिस्ट डा. हार्वर्ड अबर्टका अनुसार यो बुझ्नका लागि सुरुमा इरेक्सनको प्रक्रिया बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
वास्तवमा पुरुषको लिङ्ग तीन सिलेन्डरले बनेको हुन्छ । माथिल्लो दुई सिलेन्डर स्पन्जजस्तो तन्किन सक्ने तन्तुले भरिएका हुन्छ । यस्तै मुनिको सिलेन्डरले मूत्र थैलीबाट पिसाब बाहिर निकाल्न मद्दत गर्छ ।
जब व्यक्ति उत्तेजित हुन्छन् तब त्यो स्नायू प्रतिक्रिया र त्यसका कारण सुरु हुने क्रियाकलापका कारण हुन्छ । यतिबेला रगत स्पन्जी तन्तुमा आउँछन् र त्यो फैलिने गर्छ । सिस्टम यस्तो छ कि रगत त्यहाँ आएर रोकिने गर्छ । त्यतिबेला व्यक्तिलाई इरेक्सन महसुस हुन्छ ।
यसका लागि नसाबाट पर्याप्त मात्रामा नाइट्रिक अक्साइड निस्कन आवश्यक छ । नसा यति खुकुलो हुनुपर्छ कि त्यहि गतीमा रगत निस्कन सकोस् । जब कुनै कारणले लिङ्गसम्म रगत पुग्न सक्दैन, तब त्यसमा इरेक्सन हुँदैन र यसैलाई इरेक्टाइल डिसफंक्सन भनिन्छ ।
– विशेषज्ञका अनुसार इरेक्टाइल डिसफंक्सनका कारणमा तनाव, डिप्रेशन र प्रस्तुती सम्बन्धि तनाव पनि समावेश छन् । तर यदि रक्तसञ्चारमा कुनै समस्या आइरहेको छ भने यसको असर इरेक्सनमा हुन सक्छ । स्नायू प्रणालीमा कुनै गडबडी वा हर्मोन सेन्सिटिभिटी पनि यसको कारण हुनसक्छ ।
– साधारणतया इरेक्टाइल फंक्सनको सम्बन्ध सिधा सिधा रक्तसञ्चारसँग हुने गर्छ र यसका कारण इरेक्टाइल फंक्सनमा कुनै पनि गडबडी मुटुको रोगको संकेत पनि हुनसक्छ । कोभिड–१९ का कारण पूरा शरीरमा अक्सिजनको सप्लाइ बाधित हुन्छ र रक्तसञ्चारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । लिङ्गलाई रक्तसञ्चार गर्ने धमनी (आर्टरी) ब्लक वा संकुचित हुनसक्छ । यदि यस्तो भएको खण्डमा लिङ्गसम्म रगत पुग्न पाउँदैन तब इरेक्टाइल डिसफंक्सन हुनसक्छ ।
– नयाँ दिल्लीमा डायोज मेन्स हेल्थ सेन्टरका क्लिनिकल डायरेक्टर डा. विनित मल्होत्रा भन्छन्, ‘कोभिड–१९ को मानसिक र भावनात्मक स्वास्थ्यसहित व्यक्तिको समग्र स्वास्थ्यमा ठूलो प्रभाव पर्छ ।
– वर्ल्ड जर्नल अफ मेन्स हेल्थमा प्रकाशित एक अनुसन्धानमा दाबी गरिए अनुसार संक्रमणको थुप्रै महिनापछि पनि लिङ्गमा संक्रमण भेटिएको छ । दाबी गरिए अनुसार कोभिड–१९ का कारण शरीरका थुप्रै तन्तुको काम गर्ने तरिकामाथि असर परेको छ जुन इरेक्टाइल डिसफंक्सनको कारण हुनसक्छ ।
– विशेषज्ञका अनुसार कोभिड–१९ का कारण केही हानी स्थायी भइरहेका छन् जबकी केही अस्थायी । इरेक्टाइल डिसफंक्सन स्थायी हो, होइन भन्नेबारे थप अनुसन्धानको आवश्यकत छन् ।
सरकारी एम्बुलेन्स प्रयोगबिहीन हुँदा बिरामी मर्कामा ४ मिनेट पहिले
अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले अवितरित हकप्रद लिलामी ल्याउँदै ६ मिनेट पहिले
मलाई त तै सुवा मन पडी बजारमा सार्वजनिक १९ मिनेट पहिले
योग परम्परालाई नयाँ उचाइबाट अघि बढाइनुपर्छः उपप्रम पौडेल २३ मिनेट पहिले
अपि पावर कम्पनीको हकप्रद शेयरमा असार ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने २३ मिनेट पहिले
सल्लेरीका विस्थापित परिवारलाई हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पुर्याइयो २८ मिनेट पहिले
अमेरिकाको अलाबामामा भएको दुर्घटनामा परी ९ बालबालिकासहित १० को मृत्यु ३९ मिनेट पहिले
नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयरमा ३ लाख १७ हजार कित्ता खरीद माग ४६ मिनेट पहिले
काठमाडौं उपत्यकासहित देशका केही ठाउँमा यसरी खुल्यो माैसम ५ घण्टा पहिले
दाङमा संक्रमित भन्दा निको हुने धेरै ४ हप्ता पहिले
ज्यानमारा भाइरसबाट गण्डकीमा थप ७ जनाको मृत्यु ५ दिन पहिले
महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना मुक्तिका लागि प्रार्थना गर्दै स्थानीयवासी ४ हप्ता पहिले
कोरोना उपचार निःशुल्क गर्ने भन्दै झुटो प्रचारमा गल्याङ नगरप्रमुख अधिकारी (भिडियोसहित ) ३ हप्ता पहिले
करोडौं मूल्यको चामल एकै नाकाबाट आयात २ वर्ष पहिले
प्रदेश नं १ मा थप १६५ जनामा कोरोना पुष्टि ६ महिना पहिले
१६ वर्षीया किशोरी काका र हजुरबुबाबाट बलात्कृत ! ५ महिना पहिले
भक्तपुरका बैंकमा सर्वसाधारणको अत्यधिक भीड १ वर्ष पहिले